Maraykanka Iyo Lix Waddan Oo Carbeed Oo Cunna-qabatayn Ku Soo Rogay Shirkaddo Loo Haysto Maalgelinta Ururka ISIS - Jigjiga Online
HomeSomalidaMaraykanka Iyo Lix Waddan Oo Carbeed Oo Cunna-qabatayn Ku Soo Rogay Shirkaddo Loo Haysto Maalgelinta Ururka ISIS
Maraykanka Iyo Lix Waddan Oo Carbeed Oo Cunna-qabatayn Ku Soo Rogay Shirkaddo Loo Haysto Maalgelinta Ururka ISIS
Washington (JO) – Mareykanka iyo lix waddan oo kale ayaa cunaqabateyno cusub saaray shaqsiyaad lagu eedeeyay inay gacan ka gaysteen maalgalinta howgallada kooxda ISIS iyagoo boqollaal kun oo doollar ugu deeqay hoggaamiyeyaasha kooxda ee Ciraaq iyo Suuriya.
Tallaabadaan ayaa qeyb ka ah sidii kor loogu qaadi lahaa carqaladeynta shabakadaha maalgalinta argagixisada ee adduunka,” ayuu yidhi Xoghayaha Arimaha Dibadda Mareykanka Mike Pompeo.
“Tallaabooyinka maanta la qaaday waxay digniin dheeri ah u yihiin shakhsiyaadka iyo ganacsiyada bixiya taageero maaliyadeed ama kaalmo maadi oo ku wajahan ururrada argagixisada,” ayuu yidhi Mike Pompeo.
Wadamada soo rogay cunoqabatayntaan waxay kala yihiin, Mareykanka, Baxrayn, Kuweyt, Cumaan, Qatar, Sucuudiga iyo Imaaraadka.
Waxaa ku jira cunaqabateynta sedex shirkadood oo bixiya adeegyada lacagaha ee Suuriya, Waaxda Lacagta Mareykanka ayaa sheegtay inay door muhiim ah ka ciyaartay wareejinta lacagaha lagu taageerayo dagaalyahanada ISIS waxayna siisay boqolaal kun oo doollar hogaanka ISIS.
Tan iyo markii laga adkaaday waxa loogu yeero khilaafada islaamka ee Daacish sanad ka hor, kooxdu hadda awood uma lahan in ay canshuur ka qaadaan dadka maxalliga ah. Hase-yeeshe, khubaradu waxay leeyihiin ISIS ayaa haysata lacag aad u fara badan, taas oo ay u isticmaasho maalgalinta dhaqdhaqaaqyada kooxaha.